नपढ्ने लाइ ठुलो दशा लाग्नेछ अबस्य पढेर नाग देवताको दर्शन गरौ ! – Namaste Host
April 3, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on नपढ्ने लाइ ठुलो दशा लाग्नेछ अबस्य पढेर नाग देवताको दर्शन गरौ !
पारेर, सबलाई खाना पकाई खुबाएर, घरघरमा यातायात पुगाएर, हरेक घरमा आधुनिक मशिनहरु चलाइ दिएर, भारतबाट बिदेशी मन्द्रा आर्जन गर्न सक्ने क्षमताबान छन; तर हामीसंग बिजुलि निकाल्ने बिध्या छैन; हामी त्यसैले गरीब छौ। हाम्रा हिमालहरुले हामीलाई प्रसस्त बिदेशी मुन्द्रा दिन सक्छन; तर हामीलाई पर्यटन ब्यबसायको ज्ञान छैन, बिदेशी
******यो समाचारको पूरा भिडियो हेर्नका लागि यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस् ****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******